Xagee uga nabad gasho danab? | Saadaasha Shabakadda
Xagee uga nabad gasho danab?
Jarmal Portillo | | Kala bixid, Dhacdooyinka saadaasha hawada
Had iyo jeer waxaa la yiri waxaad u badan tahay inay kugu dhacdo biriq ama uu cuno libaax badeed intii aad ku guuleysan lahayd bakhtiyaanasiibka. Qayb ahaan waa "qaladkeenna" haddii ay jiraan khilaafaadkaas iyo in kale. Si kale haddii loo dhigo, itimaalka aan ku guuleysanno bakhtiyaanasiibka ayaa ka weyn inta aan dheelno. Sidoo kale, itimaalka danab baa inagu dhaca way ka weyntahay iyadoo kuxiran hadba meesha aan kagajirno duufaanta.
Taasi waa sababta aan kuugu sheegi doono meelaha ugu amniga badan uguna halista badan marka ay danab dhacdo. Qaar ka mid ah talooyinka aasaasiga ah ee loogu talagalay ha soo jiidan "rays" iyo inaan awoodno inaan iska ogaanno maadaama xaaladahan aan dooneyno inaan noqono halyeeyada.
Talada ugu weyn ee laga fogaado inaad ahaato dhibbane danab iyo koronto ku dhacdaa waa ma istaagaan. Taasi waa, inaadan ka istaagin dusha sare si aysan na dareemin. Hillaac wuxuu meelaha ku dhuftaa iska caabin yar. Haddii, tusaale ahaan, aad la yaabto duufaan ku dhex taal berrinka, ha istaagin ama ha ku dhuuman geed hoostiisa. Haddii beertu fidsan tahay, geedaha ayaa ah meelaha ugu sarreeya, sidaas darteed waa u badan tahay inuu geed ku dhaco. Haddii aad tahay meesha ugu sarreysa berrinka, naso inaad hubiso in warqadaha codbixinta ee danabku kugu dhacayo ay yihiin kuwaaga (waxaa fiican inaad u rido waraaqaha bakhtiyaanasiibka, i rumee).
1 Meelo amni leh oo ka yimaada hillaaca
2 Meelaha halista ah ka hor inta danabku ku soo dhicin
Meelo amni leh oo ka yimaada hillaaca
Mid ka mid ah meelaha ugu nabdoon ee hillaaca laga gabado ayaa ah Baabuur Waa dhif iyo naadir inay tahay meesha ugu nabdoon, laakiin hase yeeshe, waa. Tusaalahii hore, haddii duufaan nagula yaabto bartamaha berrinka, waxa ugu aaminka badan waa inaan gaarigeena raacno oo aan daaqadaha xirno. Waad ku mahadsantahay saameynta "Faraday qafis", kaasoo sababa korontada inay ku daadato dusha sare ee biraha banaanka mana saameyneyso gudaha, waxaan ka badbaadi doonnaa shoogga korantada.
Tani waa waxa dhaca marka danab ku dhacdo gaari. Gudaha gudihiisa waa aamin
Meel kale oo nabdoon waa diyaaradii. Si kasta oo ay u muuqato wax la yaab leh, diyaaradda waxay ka badbaadi kartaa hillaaca. Saamaynta aan soo sheegnay ee "Faraday cage" ayaa sidoo kale khuseysa diyaaradaha. Saamiga ayaa dhacaya, waxaa loo qaybiyaa inta u dhexeysa oo wuxuu ku sii socdaa dhulka isagoon saameyn ku yeelan rakaabka. Waa maxay dhibaatada kiisaskaas? Hagaag, fudud, ma joogno dhulka, oo haddii danabku saameeyo qalabka ku jira qolka diyaaradda, ka dib diyaaraddu dhibaatooyin ayay la kulmi doontaa waana inay degtaa sida ugu dhakhsaha badan
Meelaha halista ah ka hor inta danabku ku soo dhicin
Ilaa hadda waxaan ka hadalnay meelaha ugu nabdoon ee aan duufaan ku jiri karno iyadoo aan waxyeello soo gaarin. Laakiin sidoo kale waxaa jira meelo kuwaas oo ah u nugul oo badan duufaanka iyo in aysan ka waaban doonin inay ku bartilmaameedsadaan haddii ay kaa helaan meelahaas midkood.
Meesha aan waligood, laakiin marna, waa inaad noqotaa inta lagu jiro duufaanta xeebta, barkadda ama buurta. Labada hore ayaa aad u cad: biyuhu waxay qabtaan koronto. Waxaan u maleynayaa in waxa ugu macquulsan ay tahay in laga fogaado biyaha xaaladaha duufaanta korantada. Maraakiibta ayaa si gaar ah u ah meelo khatar badan marka duufaan ka dhacdo badda. Markabku waa waxa ugu badan ee ka taagan badda, sidaa darteed, waraaqaha cod-bixiyaha ee ku guuleysta shucaaca sanadka wuxuu noqon doonaa sagxadda ama rakaabka markabka. Xeerka Dahabka ah horey loogu magacaabay maahan inuu ka soo dhex muuqdo dadka kale. U ogolow kuwa kale inay kaa istaagaan, xaaladdan oo kale, ha noqonin mid la tartamaya. Si kastaba ha noqotee, maanta tani xoogaa waa la xakameynayaa, maaddaama dhammaan doomaha ay ku qalabaysan yihiin nidaamyo danab bir ah oo ku yaal maaddooyinka waaweyn.
Marka loo eego buurta sidoo kale waa macquul in aan si fiican u cuneyno hillaaca hortiisa. Aad bay muhiim u tahay in la ogaado xaaladaha cimilada ka hor intaadan aadin socodka ama fuulitaanka. Haddana waxaan ku dabaqi doonnaa qaanuunka dahabiga ah, buurta aad baan caan uga ahaan lahayn hillaacuna si fudud buu noo soo gaari doonaa.
Giraffes waxay ku fiicnaadaan savannah sidaa darteed waxay u nugul yahiin in biriq ku dhacdo.
Guriga sidoo kale waa inaad taxaddar yeelataa. In kasta oo ay tahay meesha ugu nabdoon, xitaa gaariga, waa inaan xirnaa daaqadaha. Hillaacyo badan ayaa la socda xilliyada hawada, haddii gurigaaga uu leeyahay laba daaqadood oo furan iyo qabyo heer sare ah, danab ayaa ka geli kara daaqadda oo ka bixi karta tan kale. Haddii inta uu safarka ku jiro uu ku helo, wuu ku dhaafi doonaa adiga oo aan fikir labaad ka helin.
Marka talooyinkan waa inaad u diyaar garowdaa si aad uga badbaado waxyeelada danab. Bakhtiyaa nasiibka ka dhig mid ka badan hillaaca, adiga ayay kugu xidhan tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Xagee uga nabad gasho danab?
Daruuraha ayaa sharxi kara qarsoodiga saddexagalka Bermuda
Cimilada cimilada ayaa jirta